Mikel Arteta oo sharaxaad ka bixiyay go’aanka uu Aubameyang kaga tagayo kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 02 Agoosto 2020. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa cadeeyay inuu ku kalsoon yahay in Pierre-Emerick Aubameyang uu kusii nagaan doono naadiga Gunners.
Gunners ayaa xalay ku guuleystay koobka FA Cup-ka kaddib markii ay Chelsea kaga adkaadeen 2-1, kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka caalamiga ah ee Wembley, xilli labada goo lee Arsenal uu dhaliyay Aubameyang.
Haddaba magaca Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Arsenal suuqa xagaaga gaar ahaan maadaama uusan wali cusbooneysiin qandaraaskiisa kooxda, kaasoo dhacaya dhamaadka xagaaga 2021.
Balse kaddib markii ay Arsenal ku guuleysatay koobka FA Cup-ka iyo joogitaanka tababare Mikel Arteta, Aubameyang ayaa aad ugu dhow inuu qandaraaska u kodhiyo kooxdiisa Gunners.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports”:
“Aubameyang wuu ogyahay waxa aan ka fakarayo, xaqiiqdii waxaan rabaa inaan dhiso koox isaga ku hareereysan”.
“Waxaan u malaynayaa inuu doonayo inuu sii joogo, howlgalka lagu cusbooneysiinayo qandaraaskiisa ayaa ku socota wadadii lagu dhameystiri lahaa”.
“Xaqiiqdii daqiiqadaha noocan oo kale ah ee ku guuleysiga koobka FA Cup-ka, waxay naga caawin doontaa inaad garato inaan ku soconno wadada saxda ah”.
“Waxaa jecel qof walba ee kooxda ka tirsan, sidaas darteed waxaan rajeynayaa inuu nala sii joogi doono, waxaana qabaa inuu sii wadan doono”.